| Tour Code: 044
Mankany amin'ny seranam-piaramanidina Cochin (manatrika sy mahazo fanampiana amin'ny fahatongavana) ary mandefasa any amin'ny Hotel. Ny tolakandro dia mandalo fitsangatsanganana amin'i Cochin - mitsidika ny lapan'ny trano palace, tranokala holandey, jodia jiosy, synagogan'ny jiosy, fiangonana St. Francis sy sambo mpanjono sinoa. Mijanona ao amin'ny Cochin.
DAY 02 : COCHIN - MUNNAR (140 KMS - 04 ora fiara)
Rehefa tapitra ny sakafo maraina dia mijery avy ao amin'ny Hotel ary mitondra fiara ho an'i Munnar, rehefa hiditra ny hotely. Andro mahafinaritra. Mijanona alina ao Munnar.
DAY 03: COCHIN - MUNNAR (140 KMS - 04 ora fiara)
Taorian'ny fandehanana sakafo maraina ho an'ny fitsidihan'i Munnar - fitsidihana an'i Mattupetty Dam, Kundale Lake, Echo Point, Shooting Point ary Eravikulam National Park. Mijanona alina ao Munnar.
DAY 04 : MUNNAR - THEKKADY (110 KMS - 03 ora fiara)
Rehefa tapitra ny sakafo maraina dia mialà amin'ny Hotel ary mandehana any Thekkady (Periyar), rehefa hiditra ny hotel. Ny tolakandro dia mandeha manatrika ny Thekkady. Mijanona ao amin'ny Thekkady.
DAY 05: THEKKADY - KUMARAKOM (140 KMS - 04 ora fiara)
Rehefa tapitra ny sakafo maraina dia mialà amin'ny Hotel ary mandehana any Kumarakom, rehefa hiditra ny trano fidiovana (jereo amin'ny fotoana 12.30 PM - A / C dia miasa amin'ny 9.00 PM ka 6.00 AM). Ny andro feno dia mankafy ny fitsangatsanganana manerana ny Ranomasina Vembanad. Mijanona ao amin'ny trano fatoriana.
DAY 06 : THEKKADY - KUMARAKOM (140 KMS - 04 ora fiara)
Rehefa vita ny sakafo maraina dia mialà ao amin'ny trano fidiovana (jereo ny fotoana 9.30 AM) ary mandehana any Kovalam, rehefa hiditra ny hotel. Toerana mahafinaritra any Kovalam Beach. Fijanonana israelita any Kovalam.
Aorian'ny fandehanan'ny sakafo maraina ho an'ny Trivandrum - fitsidihana ny Sri.Padmanabhaswami, Napier Museum, Sri. Chitra Art Gallery, Zoo, Kuthiramalika Palace ary Veli Lagoon. Fijanonana israelita any Kovalam.
Rehefa tapitra ny sakafo maraina dia mijery ny Hotel ary mitondra fiara mankany amin'ny seranam-piaramanidina / fiaramanidina Trivandrum.